Hazvisi pachena kuti Apple ichavhurazve zvitoro zvayo muChina muna Kukadzi 10 | Ndinobva mac
Zvese zvinoratidza kuti hapafanire kuve neyakajairika tsika kuti itange kutonga muChina, asi zviitiko zvenguva pfupi zvinoratidza izvozvo Apple haioni yakajeka kuti kuvhurwa kwayo kweakavharwa zvitoro muChina nekuda kwecoronavirus inogona kuvhura inotevera Kukadzi 10.
Mukuru wezvitoro zvekambani iyi pasirese, Deirdre O'Brien, ataura nevashandi vemuzvitoro zveApple zviri kuChina kuvayambira kuti vari kunyatsotevera zvese zviri kuitika munyika uye kuti Hazvina kujeka nanhasi kana zvitoro zvakavharwa zvichazovhurika Muvhuro unotevera kana kuti vachamirira kwenguva yakati rebei.
Nhau idzi dzinobata zvakananga mahofisi ekambani munyika yese uye zvitoro makumi mana nezviviri zviri kushanda pari zvino. yakavharwa nekuda kwekonavirus. Hutachiona uhwu huri kukanganisa nyika zvizere uye nepo Apple iri kutaura nezvekuchengetedzeka kwekuvhura zvitoro kana kwete, O'Brien akatumira tsamba kuvashandi kwaiwanikwa nhepfenyuro yeAppleInsider:
Chikwata, ndinoda kukutendai mose zvikuru nekutarisira, kushanduka uye mweya wamakaratidza mumavhiki apfuura. Kutenderera pasirese, mhuri yese yeApple yakazvipira kubatsira shamwari, vashandi, nharaunda, vatengesi, vatinoshanda navo nevatengi kuChina sezvavanotarisira hutano hwavo uye vachidzokera kuhupenyu hwezuva nezuva.
Tsigiro yaApple yemhinduro yepasirese kune coronavirus yakakura uye ichienderera, kusanganisira nemupiro wedu kuhutano hweveruzhinji. Kubva tsamba yangu yekupedzisira, takagara tichikurukura nenyanzvi dzehutano, vakuru vehurumende, uye zvikwata zvedu nevatungamiriri muChina. Tichifunga nezve idzi hurukuro, ini ndoda kugovera ruzivo rutsva nezve nzvimbo dzekushandira Apple. Tiri kushanda kuvhurazve mahofisi emakambani eApple nenzvimbo dzekutaurirana muChina svondo rinouya.
Isu tinoziva kuti kufamba kwega uye kurambidzwa kwekufamba zvinhu zviri kuomesa zvinhu, zvikoro zvinoramba zvakavharwa munzvimbo zhinji, uye mamaneja achashanda pamwe nezvikwata zvavo kupa rutsigiro rwakawedzerwa. Iwe uchagamuchira yekutevera-yekutaurirana nerumwe ruzivo munguva pfupi. Zvitoro zveApple zvekutengesa zviri kushandira kuti zvivhurezve pazuva rinofanirwa kutarisirwa svondo rinouya. Kuwedzera kuchenesa, zvirevo zvehutano, uye kurambidzwa kwenzvimbo dzakatenderedza nzvimbo dzeveruzhinji chichava chinhu mukutora uku.
Zvitoro zvevatengesi vanogashira zvigadziriso kubva kumaneja avo pazuva ravo rekuvhura chitoro neruzivo rwese rwavanoda. Vatungamiriri vebhizimusi rimwe nerimwe vachange vachikubata iwe nekukurumidza nerumwe ruzivo rwakanangana nebasa ravo Pamusoro pemaneja wako, yako People Bhizinesi Partner uye People Support zviripo kwauri kupindura chero mibvunzo kana kunetseka kwaungave uine. Kuti urambe uchienderana nekuedza kwaApple, ramba uchitsvaga yakatsaurwa peji recoronavirus ratakasika pane saiti yePeople.
Sezvo isu tichishanda pamwe kuti zvishoma nezvishoma titangise basa mukati memavhiki anotevera anoverengeka, kugara kwako zvakanaka ndiko kutanga kwedu. Tinotenda zvikuru kwamuri mose nekutibatsira panguva ino yakaoma nekunzwira tsitsi nekunzwisisa kukuru.
Neichi chikonzero, tinogona kufunga kuti kuvhura uku kuchafambira mberi uye kwete kamwe kamwe sezvataigona kufunga pakutanga uye zvinokwanisika kuti mune dzimwe nzvimbo madhoo achiri kuvharwa. Apple haioni yakajeka uye zvine musoro izvi zvinodzivirira zvakajairika kudzoka muzvitoro sezvazvinoitika nemumwe wevanonyanya kupa kambani yeCupertino kuChina, Foxconn, iyo parizvino yaifanirwa kutanga kugadzirwa Muvhuro unotevera asi parizvino zvinoita kunge hazvizoita sekudaro uye vashandi parizvino vane ganhuriro yekuwana kudzamara kuziviswa, pasina zuva rekutanga nhasi.
Ngatitarisirei kuti zvese zvinodzokera pane zvakajairwa nekukurumidza sezvazvinogona, asi pamusoro pazvo mushonga wekutapukirwa nehutachiona uhwu unogona kuwanikwa nekukurumidza
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Hazvizivikanwe kana Apple ichavhurazve zvitoro zvayo zveChina muna Kukadzi 10.